Yonke ukunakekelwa kuthathwe ekuhlanganiseni okuqukethwe kwale webhusayithi.
Noma kunjalo, lonke ulwazi mayelana nokuhlala luzoshintsha. Zonke i-Seasons ngeke zibophezeleke nganoma yimaphi amaphutha, ukushiywa, ukungaqondani noma izimangalo ezivela kumkhangiso noma noma yikuphi ukuhlelwa noma ukubhuka.
Uma ukubhuka impahla esingayincoma ukuthi uqinisekise yonke imininingwane, kuhlanganise nanoma yiziphi izimo zokubhuka, ziqinisekiswa nge-imeyili noma ngokubhala.
Siphinde sikukhumbuze ukuthi umshuwalense weholide / wezokuvakasha ubalulekile futhi kungcono ukukhishwa ngesikhathi sokubhuka indawo yokuhlala nokuhamba.
Imibandela Nemibandela Jikelele
Izakhiwo ezifakiwe zihlinzekwa ngamaholide okuzigcina nge-weekly, ngokuvamile ngoMgqibelo kuya ngoMgqibelo (4 pm ngosuku lokufika ku-10 ngosuku lokuhamba) ngaphandle uma kuchazwe ngenye indlela, ngokwemigomo Nemibandela Yokuqasha. Ngenkathi zonke i-The Seasons zizama ukuqinisekisa ukuchithwa kwalo lonke ulwazi oluhlinzekwayo kanye nemininingwane yendawo efanele, banikwa ngokukholwa okuhle. Ayikho iwaranti enikezwa ngokunemba kwayo futhi ayikwamukeli umthwalo noma umthwalo wokulahlekelwa noma ukulimala okubangelwa ulwazi olunikeziwe noma izitatimende ezenziwe noma ngokubhala noma ngokubhala.
Ukubhuka iholide lakho
Uma usuqumile ukutholakala kokuhlola kwendawo, sizobamba ukubhuka okwesikhashana kuwe kuze kube yizinsuku eziyisikhombisa kuze kube yilapho sithola inkokhelo yakho ukuze ukhokhe noma isheke noma ikhadi lesikweletu.
Ifoni noma i-Fax ukubhuka kwakho
I-Tel + 44 (0) 1456 451911
Ifeksi + 44 (0) 1456 476243
Sizojabula ukukusiza nganoma yimiphi imibuzo ongase ube nayo.
Uma ngabe impahla ingabhekwa njengefanelekile yi-All The Seasons noma, ngenxa yezimo ezingaphezu kokulawula kwethu, impahla yakho ekhethiwe ayitholakali I-All The Seasons izobuyiselwa noma yiliphi ikhadi lesikweletu noma enye inkokhelo (kufaka phakathi noma yiziphi izinkokhelo zokuphatha). Ukuvikelwa kokukhansela Sikhuthaza kakhulu ukuthi usebenzise umshuwalense wokukhansela iholide ukumboza izindleko zeholidi lakho Umhlinzeki Womshuwalense Wokuhamba . Lokhu kuzokunikeza ingcezu yengqondo uma umcimbi ongalindelekile kukuphoqa ukuba ukhansele iholidi lakho. Sizothumela amafomu adingekayo ngamarisidi wokubhuka ngokuthunyelwe.
Ukukhokha kweHholide lakho
Sizame ukukhokha iholidi lakho njengento elula ngangokunokwenzeka. Ukukhokhwa kokuqala yi-25% yenkokhelo yokuqasha okuphelele futhi kungakhokhwa isheke, ukheshi, ikhadi lesikweletu (Mastercard / Visa) noma ikhadi lesikweletu (i-Maestro noma i-Delta). Sicela uqaphele ukuthi kukhona ukukhokhiswa kwe-2.5% yokuthengiswa kwekhadi lesikweletu. Ama-Debit amakhadi ayikhokhwa Ibhalansi ikhokhwa kungakapheli amasonto ayisishiyagalombili ngaphambi kokuqala kweholide. Uma ukubhuka kungakapheli amasonto ayisishiyagalombili ekuqaleni kweholidi lakho, ukukhokha ngokugcwele kuyadingeka ngefomu lakho lokubhuka. Ulwazi kufaka phakathi izikhombisi-ndlela, imiyalo eyinhloko kanye nenombolo yokuxhumana ikhishwa uma kutholakala ukukhokha kokugcina
Konke ukuthengiselana kusetshenzwa ngesandla usebenzisa indlela "yeKhasimende engekho". Uma udinga ukuthola irekhodi lakho lokuthenga ikhadi lesikweletu sicela uxhumane nathi.
Ukubhuka okuvela ngaphandle kwe-UK kuyamukelwa kakhulu futhi ngenxa yobunzima ibanga lingabaphoqa sivumela kuze kube yizinsuku eziyishumi ukubhuka okuzoqinisekiswa kusukela ngosuku lokubhuka okwenziwe. Ukulinganisa amacala kubangelwa amasonto ayisishiyagalolunye ngaphambi kokuqala kwamaholide. Ukukhokha okuvela ngaphandle kwe-UK kufanele kwenziwe ngekhadi lesikweletu, (Mastercard neVisa). Noma yiziphi izinkokhelo zasebhange ezizokhokhwa zizokhokhwa ngokukhanselwa kwabasebenzi. Sicela uqaphele ukuthi, uma ukubhuka sekuqinisekisiwe, unesibopho sezindleko zonke zeholide. Kodwa-ke, uma isizathu sokukhansela singahlanganiswa nesimiso somshuwalense wakho, sizokwenza, noma kunoma yisiphi isenzakalo, sizame ukuvumela kabusha impahla futhi, uma siphumelele, sizobuyisela imali egcwele, ngaphansi kokukhokha okuncane okuphethe.
Kubalulekile ukuthi ukukhanselwa kwenziwa ngocingo okulandelwa ukuqinisekiswa okubhaliwe ngokushesha. Impahla ngayinye Impahla ngayinye inikezwe futhi ifakwe amandla okubamba indawo evumelekile ehlala kuyo futhi ihlanganisa izimbiza nezinhlaka, ukugqoka, ukusika, insimbi kanye nebhodi le-ironing. Izinto ezinkulu zemishini yasendlini zihlelwe emininingwaneni yomhlaba ngamunye. Amathelevishini; ezindaweni ezithile ukukhethwa kwesiteshi kanye nokwamukela kungenzeka kube mpofu. Ezinye izindawo zigeza kuphela. Uma kungenjalo ukugeza kukhonjisiwe kusho ukuthi akukho eshaweni endaweni, ngisho nangaphezu kokugeza.
Ezinye izindawo zingavumela izilwane ezifuywayo ezingaholela ekukhokhweni. Izilwane ezifuywayo kufanele zigcinwe ngaphansi kokulawula okuqinile ngaso sonke isikhathi. Uma kukhona ukungabaza ngokuthi indawo iyakulungele yini isilwane sakho sikukhuthaza ukuba usifonele kanye nombuzo wakho. I-Linen Zonke izakhiwo zinikezwa ngemithwalo, (ama-double per person) kanye netineni zokulala. Amathawula awahlanganisiwe entengo, ngaphandle uma kuchazwe ngenye indlela. Ukuhlanza Zonke izindawo zihlanjululwa kahle phakathi kwe-let ngayinye, Nokho, njengoba nje isikhathi esilinganiselwe sitholakala ekuhlanzeni izakhiwo, yisimo sakho sokuvumela ukuthi ushiye impahla kanye nokuqukethwe kwakho njengoba uthola.
Ukuphumula okufishane Amaholide amafushane okuphumula amahora amathathu noma ngaphezulu angalungiswa kwezinye izindawo, ngokuya ngokutholakala ngokuvamile ngezikhathi eziphakeme. Izikhalazo Kubalulekile kumnikazi wendawo nakuzo zonke izinkathi zonyaka ukuthi abaholi bamaholide bajabulele iholide yabo futhi yonke imizamo yenziwe ukuqinisekisa lokhu. Kodwa-ke, esimweni esingenakwenzeka sokunganeliseki ngendawo noma yimuphi inkinga esilandelayo, i-holidaymaker kufanele ixhumane nathi ngokushesha, umnikazi noma umnakekeli / umnakekeli ukuze ithuba lokulungisa le nkinga linikezwe.
IMITHETHO NEMITHETHO YOMHLABA Umqashi uzoqinisekisa ukuthi izinga lokuhlanzeka kwezakhiwo liphakeme kakhulu ekuhambeni kwabo njengoba befika. Inkokhelo ye-£ 50 ingakhokhiswa uma lesi simo singagcinwa. I-Hirer ngeke ivumeleke indawo noma ingxenye yayo. Inani labantu abahlala kule ndawo akumele lidlule inani elishiwo yendawo. Umqashi ubopha futhi uzibophezele ukuphuma endaweni engasebenzi ngaphandle kokufuna isikhathi sokuqashwa. Umqashi ubopha futhi uzibophezele ukukhokha omncane mayelana nokulahleka noma umonakalo ongaphezu kokugqoka nokudiliza okungalungile. Ukukhokhwa kwakho kokuqala kufaka idiphozi ye-25% yenkokhelo yokuqashisa inani, kanye namacala okungezela okufuywayo. Ibhalansi yemali yokuqasha kufanele ikhokhwe okungenani amasonto e-8 ngaphambi kokuqala kweholide. I-Lessor ingase iphathe ukubhuka njengoba ikhanseliwe uma ibhalansi yokushaja kwemali ingathunyelwa ngalolu suku. Uma ukubhuka kwenziwa ngaphakathi kwamasonto e-8 ekuqaleni kweholide, ukukhokha ngokugcwele ngesikhathi sokubhuka kuyadingeka. I-Hirer iyavuma ukuthi, uma kwenzeka kukhansela, ngenkathi yonke imizamo enengqondo izokwenziwa ngumncanyana ukuba aphinde avumele, uMhlonishwa uzoba nomthwalo wokukhokha isikhathi sokuhlala esikhishwe uma omunye engatholakali. I Lessor, agents noma abasebenzi bakhe, abamukeli umthwalo wokulahlekelwa, ukulimala noma ukulimala kunoma yiluphi ilungu leqembu leHirer noma impahla yabo, evela nganoma iyiphi indlela ngaphandle kweleti lezakhiwo, noma ngabe libangelwa yini. I-Hirer izokwenza ukuvimbela noma yiluphi ilungu leqembu lakhe ekubangela ukukhathazeka noma ukuphazamiseka komakhelwane noma izakhamuzi ezingomakhelwane. U-Hirer uzimisele ukushiya izakhiwo eziqashiwe zivikelekile uma kusale zingabanjwanga ngesikhathi sokuvumela. I-Hirer izokwenza ukugcina izilwane ezifuywayo ngaphansi kokulawula ngezikhathi zonke, futhi ngeke zishiye izilwane ezingalondoloziwe ngaphakathi kwendawo. U-Hirer uzama ukukhulula i-Lessor kunoma yikuphi ukuboleka noma ukulimala yiliphi ilungu leqembu lakhe, noma kunjalo. I-Hirer iqinisekisa ukuthi lezi zihloko kufanele zisetshenziselwe izinhloso zeHholide. Ngakho-ke, i-Section 12 (2) neZigatshana zeSheduli 4 ye-Housing (Scotland) Act 1988 isebenza ekuhambiseni iHirer.
I-Wact kuphela njengezithunywa, ngaphansi kokuqondiswa kwabanikazi. Noma yikuphi ukuzibandakanya ekuphathweni kwalezi zakhiwo ngokwethu kwenziwa ngegama lomnikazi. Yonke imithwalo yomthetho ihlala nomnikazi kunoma yiziphi izinkinga ezingase ziphakame nempahla yakho. Sigcina ilungelo lokungena kulezi zakhiwo ngezikhathi ezizwakalayo ngenhloso yokuhlola noma ukulungisa noma ukulungisa.
Uyavuma ukukhokhela futhi ubambe i-The Seasons inkampani yabazali noma izinkampani ezixhasayo nabathintekayo babo, nabaqondisi babo, izikhulu, abasebenzi, kanye nama-agent azo zonke izikweletu, izimangalo kanye nezindleko, kufaka phakathi abameli abafanelekayo, ngenxa yokuphulwa kwalesi Sivumelwano , nanoma imuphi omunye umgomo, ukusetshenziswa kwakho noma ukufinyelela kwewebhusayithi noma noma iyiphi isayithi le-Inthanethi elixhunywe noma elivela noma elihlobene nokudluliselwa kwanoma yikuphi okuqukethwe ku- highlands4you.co.uk
I-1. UKWAMELWA KWEMITHETHO
Ukufinyelela kwakho nokusebenzisa ("Iwebhusayithi") kugxile kuphela kule migomo nemibandela. Ngeke usebenzise lewebhusayithi nganoma iyiphi inhloso engekho emthethweni noma evunyelwe yiMigomo Nemibandela. Ngokusebenzisa leWebhukhi ulamukela ngokugcwele imigomo, izimo kanye nezinkampani zokulahla okuqukethwe kule saziso. Uma ungayamukeli le Migomo Nemibandela kufanele ushiye ngokushesha ukusebenzisa Iwebhusayithi.
I-2. UKUQALA KWENKULUMO
I-2.1 Okuqukethwe kwe-Iwebhusayithi akuyona iseluleko futhi akufanele kuncike ekwenzeni noma ukuyeka ukwenza, noma yisiphi isinqumo.
I-3. ICHINTSHA KUWEBSITE
Siyaziqhenya enkonzweni yethu futhi sizama njalo ukwenza kube ngcono kuwe. Zonke i-The Seasons inelungelo loku:
Shintsha noma ususe (okwesikhashana noma unomphela) noma yikuphi ingxenye yeWebhu ngaphandle kwesaziso futhi uqinisekisa ukuthi Zonke Izinkathi azikwenzelekile nganoma yiluphi ushintsho noma ukususwa okunjalo.
Zonke i-Seasons zingashintsha le Migomo Nemibandela nganoma yisiphi isikhathi, futhi ukusetshenziswa kwakho okuqhubekayo kweWebhuthi kulandela noma yikuphi ukuguqulwa kuzothathwa njengokuvuma kwakho kwenguquko.
I-6. IZINGA KUWEBESITHI ABANYE ABANTU ABAKHULU
Lewebhusayithi ihlanganisa izixhumanisi kumawebhusayithi wesithathu alawulwa futhi agcinwe abanye. Noma yikuphi ukuxhumanisa kwamanye amawebhusayithi akusilo ukugunyazwa kwamawebhusayithi anjalo futhi uyavuma futhi uyavuma ukuthi asikho obhekene nokuqukethwe noma ukutholakala kwanoma yiziphi izingosi ezinjalo.
I-7.1 Wonke amalungelo e-copyright, amamaki okuhweba nawo wonke amanye amalungelo e-intellectual kwi-Website kanye nokuqukethwe kwawo (okufaka ngaphandle kokukhawulelwa kweWebhusayithi, umbhalo, ihluzo kanye nawo wonke ama-software namakhodi omthombo ahlobene neWebhu) anikezwe noma anikezwe ilayisensi ku-All The Seasons noma okunye okusetshenziswe yi-All The Seasons njengoba kuvunyelwe umthetho.
I-7.2 Ekufinyeleleni iwebhusayithi ukuthi uyavuma ukuthi uzothola okuqukethwe kuphela ngokusetshenziswa kwakho, okungewona ukuhweba. Akukho okuqukethwe okungalandwa, okukopishwa, okukhiqizwa, okudluliselwa, okugcinwe, okudayiswa noma okusatshalaliswa ngaphandle kwemvume ebhalwe phansi yomnikazi we-copyright. Lokhu akubandakanyi ukulanda, ukukopisha kanye / noma ukuphrinta kwamakhasi weWebhu for ukusetshenziswa komuntu siqu, okungewona ukuhweba kuphela.
I-8. ABAKHULU NOKUKHALWA KWEZINDLELA Zonke Izinkathi zonyaka zizama ukwenza indawo ibe khona ngokuqhubekayo; Kodwa asikwazi ukuvuma ukuthi isayithi lizotholakala ngamahora we-24 ngosuku.
I-8.1 I-Website inikezwa nge-"AS IS" futhi "NJENGOBA iyatholakala" ngaphandle kokumelwa noma ukugunyazwa okwenziwe ngaphandle kwewaranti kwanoma yiluphi uhlobo kungakhathaliseki ukuthi liveza noma lichazwe, kufaka phakathi kodwa lingagcini kwimibambano eqinisekisiwe yekhwalithi eyanelisayo, ukufaneleka komuntu othize inhloso, ukungabi nokuphulwa, ukuhambisana, ukuphepha nokunemba.
I-8.2 Ngezinga elivunyelwe ngumthetho, Zonke i-Seasons ngeke zibophezele ukulahlekelwa okungaqondile noma okulinganayo noma ukulimala noma yikuphi (kubandakanya ngaphandle kokunciphisa ukulahlekelwa kwebhizinisi, ithuba, idatha, inzuzo) ephuma noma mayelana nokusetshenziswa kweWebhu .
I-8.3 Yonke I-Seasons ayikho iwaranti yokuthi ukusebenza kwewebhusayithi ngeke kuphazamiseke noma kungalungile, ukuthi amaphutha azolungiswa noma ukuthi Iwebhusayithi noma iseva eyenza itholakale ayinayo amagciwane noma yini enye engase ibe yingozi noma isonakalise.
I-8.4 Akukho lutho kule Migomo Nemibandela kuzokwenziwa ukuze kukhishwe noma kugweme umthwalo wezo Zonke Izinkathi zokufa noma ukulimala okubangelwa ukungahloniphi kwe-All The Seasons noma yezabasebenzi noma ama-agent.
Uyavuma ukubuyisela futhi ubambe Zonke i-Seasons kanye nabasebenzi bayo kanye nama-agent angenangqondo kusuka nakuzo zonke izikweletu, izimali zomthetho, umonakalo, ukulahlekelwa, izindleko nezinye izindleko ngokuphathelene nanoma yiziphi izimangalo noma izenzo ezenzelwe yonke i-Season Seasons ezivela kunoma yikuphi ukuphulwa wena kule Migomo Nemibandela noma ezinye izikweletu ezivela ekusebenziseni kwakho leWebhu.
Uma ngabe yiyiphi yalezi Migomo nemibandela kufanele inqunywe ukuba ingavumelekile, engekho emthethweni noma ingaqiniseki nganoma yisiphi isizathu nganoma yikuphi inkantolo yamandla afanelekayo ngaleso sikhathi i-Term noma Isimo sizokwehlukaniswa futhi imigomo nemibandela esele iyosinda futhi ihlale isebenza ngokugcwele futhi isebenze futhi qhubeka ebopha futhi ephoqeleka.
I-12. UMTHETHO OLAWULO
Le Migomo Nemibandela iyobuswa futhi ilandwe ngokuhambisana nomthetho wase-England futhi ngalokhu uhambisa amandla akhethekile ezinkantolo ze-English.
Ukubhuka kweholide kwenziwa kuzo zonke izinkathi zonyaka
Sicela wazi ngaphandle kwediphozi asikwazi ukubamba indawo yokuhlala isikhathi esingaphezu kwezinsuku eziyisikhombisa.
Lapho ubeka indawo yokuhlala yakho yeholide idiphozi ye-25% iyadingeka. Uma isikhathi ukuya eholidini lakho lingaphansi kwamasonto ayisishiyagalombili ngesikhathi sokubhuka inani eligcwele lizofaneleka.
Ngemuva kokuba idiphozi ikhokhwe ukukhokhelwa kokugcina kungenxa yamaviki ayisishiyagalombili ngaphambi kweholidi lakho.
Uma inkokhelo ephelele ingatholakali ngosuku olufanele ngeke sikwazi ukuqinisekisa ukutholakala kwendawo yokuhlala, kungumthwalo wekhasimende ukwenza zonke izinkokhelo ngezinsuku ezifanele.
Sicela wazi ukuthi idiphozi ayibuyiswa. I-inshurensi yamaholide kufanele itholakale ehlanganisa izindleko zokukhansela. Sizozama ukunikeza imibhalo edingekayo yinkampani yakho yomshuwalense ebonisa izindleko kuwe.
Ukubhuka ukusetshenziselwa indawo yokuhlala okubandakanya imisebenzi evamile ekuqashweni indawo yokuhlala. Indawo yokuhlala akumele ingeniswe ngaphambi kwesikhathi esishiwo futhi kumele ivuliwe ngesikhathi esibekiwe, sicela ungaceli izandiso kulokhu njengoba kungabangela ukuhlazeka.
Noma yimuphi umsebenzi noma izidingo ezengeziwe kufanele zibhukwe kusengaphambili futhi kufanele zikhokhwe ngokuhambisana nesikhathi esishiwo samasonto ayisishiyagalombili kusengaphambili. Zonke iholide ze-Seasons azenzi lutho ngaphandle kwesimiso semfundo noma imishini esetshenziswe yi-ejensi enikeza imisebenzi, amaholidi e-All The Seasons azozama ukusebenzisa ama-ejensi ahlinzeka ngemisebenzi ephakeme yemfundo nemishini nge-inshuwalense efanele kanye nesitifiketi kodwa umthwalo weklayenti ukwaneliseka ukuthi inkampani yomsebenzi iqinisekisiwe ngokwanele. Zonke iholide ze-Seasons zizolandela zonke izikhalo futhi zizosusa noma yiziphi izinhlaka ezitholakale zinganikezeli izinga elidingekayo, kusuka kuhlu lwethu lwabahlinzeki bemisebenzi.
Kuyisibopho somthengi ukuqinisekisa ukuthi banesibambiso esanele ngesikhathi seholide, nekhava elengeziwe leminye imisebenzi eyengeziwe abayibamba iqhaza kuyo.
Noma yiziphi izinkinga phakathi nesikhathi seholide kufanele zibikwe kumphathi wendlu noma ku-All The Seasons ngamaholide ngocingo noma ngomuntu, ngaleso sikhathi sizozama ukuxazulula inkinga.
Zonke iholide ze-Seasons azithinteli ukulahlekelwa noma ukulimala kunoma yiziphi izinto zomthengi, kungumthwalo wekhasimende ukwenza amalungiselelo azo zonke izembozo zomshuwalense ezidingekayo, kufaka phakathi ikhava yazo zonke izinto ngesikhathi seholide.
Zonke iholide ze-Seasons zinelungelo lokushintsha indawo yokuhlala echazwe kulowo mgangatho ofanayo lapho kudingeka khona ngenxa yezimo ezingaphezu kokulawula kwethu.
Uma indawo yakho yeholidini ingasatholakali unelungelo lokubuyiselwa kwemali yakho esikhundleni sokushintsha indawo yokuhlala.
Kungumthwalo wekhasimende ukuba ube endaweni yokuthutha ngesikhathi esifanele.
Ukuvumela Impahla Yeholide Nezo Zonke Izinkathi Zonyaka
I-Holiday Holiday yangasese iyanezela
Ulwazi oluhlinzekwa ngumnikazi wendawo kufanele lukhiciswe njengencazelo eqinisiwe nenembile yendawo okufanele ikhangiswe.
Zonke i-The Seasons inelungelo lokunqaba noma ukukhansela noma yiziphi izikhangiso.
Zonke i-Seasons azibandakanyeki futhi ayithathi mthwalo ekuxoxweni.
Kuzodingeka ukuthi unikeze ucingo loxhumana naye inombolo yefeksi noma ikheli le-imeyli,